कसरी 2020 मा तपाईंको प्रार्थना जीवन बढाउने प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना २०२० मा तपाईंको प्रार्थना जीवन कसरी बढाउने
यो कुनै नयाँ समाचार छैन कि नयाँ साल यहाँ फेरि छ। २०२० को लागि प्रायः अनुमानित अन्त यहाँ छ। जबकि वर्ष भर्खरै शुरू भएको छ, तथापि, यो परिवर्तन अनुभव गर्न धेरै चाँडो छैन।
मैले प्राय: जसो व्यक्तिहरू प्रार्थना गर्न नसक्ने बारेमा गुनासो सुनेको छु। र जब तिनीहरूले गर्दछन्, तिनीहरू प्रार्थनाको ठाउँमा लामो समय सम्म बस्दैनन्। वास्तवमा प्रार्थना सत्र उनीहरूको लागि उत्तम सुत्ने औषधि भएको छ। जब तिनीहरू प्रार्थना गर्न चाहन्छन् कि निद्रा आउँदछ, उनीहरूको लागि, प्रार्थना भनेको एकदम बोरिंग गतिविधि हो।
यो एक नयाँ वर्ष हो र यो अझै राम्रो कुरा सही पाउनको लागि पर्याप्त छ। ठूलो प्रश्न यो छ कि म कसरी २०२० मा मेरो प्रार्थना जीवन सुधार गर्न सक्दछु। चिन्ता नलिनुहोस्, उनको लेखमा हामीले यस नयाँ वर्षमा तपाईंको प्रार्थना जीवनलाई सुधार गर्न केहि महत्त्वपूर्ण कुराहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण गरेका छौं।
१. भगवानलाई बढी जान्न तिर्खा र भोक
अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने धेरैले भगवानलाई चिन्दैनन्। कतिपयले उहाँलाई चिन्छन् अरू कतिपयले उहाँलाई थोरै चिन्दैनन्। तिनीहरू केवल विश्वास गर्छन् कि परमेश्वर तिनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। यद्यपि उनीहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्था वा परमेश्वरले कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्नेबारे केही पनि थाहा छैन।
दानियल ११ बनाम 11२ को पुस्तकको शास्त्रपद, जस्तै हुनेछ उहाँले flatteries द्वारा भ्रष्ट करारको विरुद्ध wickedly के: तर परमेश्वरले थाह छ कि मान्छे बलियो हुनेछ, र शोषण गर्न। यस पदमा, धर्मशास्त्रले हामीलाई यो बुझाउँदछ कि आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरू बलिया हुन्छन्। प्रार्थनाको ठाउँमा लामो समयसम्म बस्न नसक्नु शैतानको योजना हो जुन एउटा मानिसको जीवनलाई समस्यामा पार्छ। र शैतान मात्र फलिफाप हुनेछ जब यस्तो व्यक्ति पर्याप्त बलियो छैन, तपाईं बल हुनुहुन्छ जब तपाईंले प्रार्थना गरिरहनु भएको परमेश्वरलाई जान्नुहुन्छ। तपाईंले सेवा गर्नुभएको भगवानलाई चिन्नुले तपाईंलाई भरोसा र भगवानलाई बढी प्रेम गर्दछ।
जब तपाईं भगवानलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईं सधैं उहाँको उपस्थितिमा बस्न चाहनुहुन्छ, तपाईं प्रार्थनाको ठाउँमा हुँदा तपाईं परमेश्वरका भाषाहरू बुझ्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई सचेत गराउँदछ कि शैतानले तपाईंलाई स्मार्ट खेल खेल्दैछ जब तपाईं प्रार्थनाको ठाउँमा निन्द्रा, थकित वा थकित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ।
म ईश्वरीय प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ कि भनेर सोध्ने मानिसहरू संग उल्टिएको छ
के परमेश्वरले प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ?
हो, भगवानले प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ, यदि त्यहाँ प्रार्थना गर्ने मानिस छ भने, त्यहाँ सधैं भगवान हुनुहुन्छ जसको व्यवसाय प्रार्थनाको जवाफ दिनु हो। यसैले यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यस नयाँ वर्षमा परमेश्वरको लागि तिर्खाउनुहोस्। बाइबलका पदहरू केवल झूटा कुरा मात्र होइन, ती वास्तविक कथाहरू र विगतमा भएका घटनाहरूको अभिलेखहरू हुन्।
२. कसैसँग / समूहसँग प्रार्थना गर्नुहोस्
यस बर्ष २०२० मा तपाईंको प्रार्थना जीवन बढाउने अर्को तरिका कसैसँग कसरी प्रार्थना गर्ने सिक्नु हो। तपाईं दिमागमा, कोसँग प्रार्थना गर्ने छनौट गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि त्यस्तो व्यक्ति कडा हो र तपाईं भन्दा बढी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हामी प्रार्थनाको ठाउँमा आफूलाई माथि उठाउँछौं। जब प्रार्थनाको ठाउँमा हामीलाई जाँच गर्ने कोही छन्, हामी अधिक सक्रिय हुन्छौं। येशू यसको एक राम्रो उदाहरण हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न भन्नुहुन्थ्यो, ख्रीष्ट एक्लै प्रार्थना गर्न जानुभयो। तथापि, उहाँ फर्कंदा उहाँ आफ्ना चेलाहरू निद्रामा भएको भेट्नुभयो, र फेरि प्रार्थना गर्न निर्देशन दिनुभयो।
यदि तपाईंसँग २०१ 2019 मा प्रार्थना समूह छैन भने, यो उत्तम छ कि तपाईं सकेसम्म चाँडो एउटा राख्ने योजना सुरु गर्नुहोस्।
कसैले मलाई एक पटक सोधेको प्रश्न म कसरी बिर्सन्छु। प्रश्नले मलाई हाँस्दै गयो तर मलाई थाहा थियो कि यो एक गम्भीर प्रश्न हो जुन जसले सोधेको मनलाई दु: खी तुल्याइरहेको छ।
के प्रार्थनाको दौरानमा के परमेश्वरले चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ?
हाम्रो परमेश्वर आश्चर्यकर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि मुक्तिको आवश्यक थिएन भने, त्यहाँ ख्रीष्टको मृत्युको आवश्यक छैन। यदि एक नश्वर मानिस आफैंले चमत्कारहरू गर्न सक्छ भने, तब अलौकिकको आवश्यक पर्दैन। यदि पुरुषहरू द्वारा सिर्जित एक साधारण छविले सानो चमत्कार गर्न सक्दछ, स्वर्ग र पृथ्वीको निर्माताले कति अधिक। परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्थ्यो, र जो आउनु हुँदै थियो। म उहाँ हुँ, म इस्राएलको परमपवित्र हुँ, उहाँ पक्कै पनि मानवीय समझबाट टाढा चमत्कार गर्नुहुन्छ।
समुद्रलाई विभाजित गर्ने शक्ति शारीरिक भन्दा बाहिरको छ, धर्मशास्त्रमा रेकर्ड गरिएका केही चमत्कारहरूमध्ये यो एक हो। त्यस्तै गरी, आजको युगमा, हामीले मानिसलाई परमेश्वरले बुझ्न नसक्ने चमत्कारहरू देखेका छौं। हामीले कसैलाई देखेका छौं जसलाई चिकित्सा विशेषज्ञहरूले समेत मृत व्यक्तिको लेबल लगाएका छन्, तथापि, कडा प्रार्थनाहरूको सत्रले उक्त व्यक्तिलाई मृत्युबाट ब्यूँतायो। त्यसकारण हामीसँग पर्याप्त जानकारी, प्रमाणका केही टुक्रा र अनुभवहरू छन् जुन परमेश्वरले चमत्कारहरू प्रदर्शन गर्नुहुन्छ।
The. पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्
पवित्र स्थानमा प्रार्थना गरेर प्रार्थना गर्ने स्थानमा बस्नको एउटा निश्चित तरिका हो। जब हामी हामीले बुझ्ने भाषामा प्रार्थना गर्छौं, यो समय आउँनेछ कि हामी छोटो वा शब्दहरूबाट टाढा हुनेछौं। त्यसमा धर्मशास्त्रले भनेको हो कि जसले अन्य भाषाहरूमा बोल्छ उसले आफूलाई सद्गुण बनाउँछ। यद्यपि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दा प्रार्थनाको ठाउँमा धेरै समय बस्न मद्दत गर्दछ।
म कसरी पवित्र आत्मामा बोल्न सक्छु?
मैले पवित्र आत्माको बारेमा विस्तृत लेख लेखेको छु, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यसलाई पढ्न। मानिसहरूले प्राय: मलाई पास्टरले सोधेको छ, म कसरी पवित्र आत्मामा बोल्न सक्छु। के कसैले मलाई कसरी बोल्ने भनेर सिकाउने आवश्यकता छ?
होईन। होईन कसैले पनि तपाईंलाई पवित्र आत्मामा कसरी बोल्ने भनेर सिकाउनु आवश्यक पर्दैन। १ कोरिन्थी १1: -14-१-4 को पुस्तकमा लेख। प्रेरितहरू अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गर्ने बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्छन्। प्रेरित २: in मा पनि बाइबलले यो प्रस्ट पार्‍यो कि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिएका थिए र आत्माले उनीहरूलाई सक्षम पार्दा अन्य भाषाहरूमा बोल्न थाले। अन्तको अंश भन्छन् र तिनीहरूले आत्माले भनेको कुराको रूपमा बोले। यो पवित्र आत्माले पवित्र आत्मामा बोल्न बोली दिनुहुन्छ।
पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट सबै विश्वासीहरूको लागि उपहार हो। धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, अन्तमा, म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याई दिनेछु, तिम्रा छोरा-छोरीहरूले अगमवाणी गर्नेछन्, तिम्रा बुढा मानिसहरूले सपना देख्नेछन् र जवान मानिसहरूले दर्शन देख्नेछन्। परमेश्वर हामीमाथि आफ्नो आत्मा खन्याउन प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं एक पटक विश्वासी भएर जानुहुन्छ भने, तपाईंले बिन्तीका लागि ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नु भनेको तपाईंको जिब्रो नयाँ भाषाहरूको लागि सक्रिय पार्नुहोस्।
जोडको उद्देश्यको लागि, यस २०२० मा तपाईंको प्रार्थना जीवन बढाउन, केवल things कामहरू गर्नुहोस्
१. भगवानको बारेमा बढी जान्न तिर्खा र भोक
२. कसैसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्राथमिकता साथ प्रार्थना समूह वा पार्टनर
अघिल्लो लेखमाआशाको प्रार्थना
अर्को लेखमाईविल एन्स्ट्रल जडानहरू बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्टहरू
ग्लोरिया जनवरी १०, २०२० बिहान :17: 2020
पवित्र आत्माको सहायताले यस वर्ष अझ बढी प्रार्थना गर्न प्रेरित भएको छु। भगवान को मानिस धन्यवाद छ
१ m mfm प्रार्थना अंक सफलताको लागि
खोजीको राष्ट्रको लागि प्रार्थना